Deg Deg:Al-Shabaab oo dagaal culus oo rogaal celis ah soo qaaday kuna qabsadey…. – SBC
Deg Deg:Al-Shabaab oo dagaal culus oo rogaal celis ah soo qaaday kuna qabsadey….
Iyadoo saaka waaberigii goobo ka mid ah magaalada Muqdisho laga qabsadey xoogaga Shabaabka ayaa wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada Muqdisho waxay sheegayaan in xarakada Shabaabku ay soo qaadeen guluf dagaal oo aad u xoogan oo rogaal celis ah kaasi oo ay ku riixeen ciidamada AMISOM & kuwa DKMG oo iska kaashanaya.
Dagaalkii saaka oo Shabaabka looga qabsadey Suuqa xoolaha iyo waliba xeradii Maslax ayaa haatan waxaa la soo sheegayaa in ciidamada AMISOM & kuwa dawlada dib loo riixay oo haatan dagaal culus uu ka soconayo inta u dhaxaysa Suuqa Xoolaha & Huriwaa gaar ahaan agagaaraha Isbitaalka SOS & Warshada Baastada iyo goobo badan oo ka mid ah Jidka Warshadaha, waxaana jira khasaare baaxad leh oo dhimasho iyo dhaawac ah oo ka dhashay dagaalka.
Ciidamada AMISOM ayaa madaafiic xoogan waxay ku garaacayaan goobo badan oo ka mid ah fariisamada Shabaabku ku sugan yihiin ama lagu tuhunsan yahay.
Qof goob jooge ah ku sugan degmada Huriwaa oo codsadey inaan magaciisa saxaafada laga sheegin sababo dhanka amaankiisa ah ayaa sheegay in xoogagu Shabaabku dib u qabsadeen goobihii laga qabsadey, isla markaana dagaal aad u culus uu haatan socdo.
Warar dheeraad ah oo ku saabsan dagaalada Muqdisho isha ku hay SBC Online daqiiqad daqiiqad.